Deegaan | Radio Himilo | Page 5
Home / Deegaan (page 5)
Ahmed Haadi February 15, 2019
Himilo FM – Ruushka waa mid ka mid ah waddamada ugu qabow dunida, barafku waxa uu u da’aa sida roobka! Balse bilowgii toddobaadkan dadka deggan magaalooyinka Kiselevsk iyo Prokopyevsk waxay ku waabariisteen barafkii caddaa ee jidadka warnaa oo isku bedelay ...
Mahad Mohamed January 30, 2019
Himilo FM –Magaalooyin dhowr ah oo ku yaala Talyaaniga ayaa wajahaya dad yari, waxayna tani ku qasbeysaa maamulka maxaliga ah inay dadka u sheegaan lacago badan oo loo siinayo abaal marin haddii ay dagayaan magaalada. Sida warbaahinta CNN-ka soo warisay ...
Mahad Mohamed January 29, 2019
Himilo FM – Vishweshwar Dutt waxa uu dhintay 18-kii bishan Janaayo hase ahaatee xusuustiisa kama guuri doonto dadkii uu la noolaa iyaga oo ula baxay “ Ninkii geedaha Uttarakhan” Waxa uu ahaa nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka oo abuuray 5 ...
Luxembourg oo gaadiidka bilaash lagu raacayo si loo yareeyo saxmadda wadooyinka!
Mahad Mohamed January 22, 2019
Himilo FM – Luxembourg oo ay ku nool yihiin 602 kun oo qofood islamarkaana lagu tiriyo mid kamid ah wadamada ugu yar Yurub ayaa ka cabanaysa saxmad xooggan oo wadooyinka dalkaasi ka jirta. Nasiib wanaag, waxay u muuqataa in arrintan ...
Ingiriiska oo ka maarmaya gaadiidka hawada wasaqeeya sannadka 2040
Mahad Mohamed January 14, 2019
Himilo FM – Ingiriiska ayaa maanta oo isniin ah ballan qaaday inuu ka hortagayo wasaqda hawada isaga oo ka dejinaya sharci cusub oo la xiriira tayada hawada oo kharash badan uu ku baxayo. Xukuumadda Ingiriiska ayaa noqonaysa dalkii ugu horreeyay ...
Maxay Macedonia u badalaysaa magaca qaranka dalkaasi?
Mahad Mohamed January 12, 2019
Himilo FM – Baarlamaanka Macedonia ayaa ansixiyay sharci wax ka badal ku sameynaya magaca dalkaasi oo loo badalayo jamhuuriyadda Macedonia. Ra’iisul wasaare Zoran Zaev ayaa si dirqi ah ku xaqiijiyay seddex meelood labo meel codadka uu u baahnaa si loo ...
Maxay tahay sababta dad badan uga guuraan magaalada Paris?
Mahad Mohamed January 8, 2019
Himilo FM – Magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxaa sannad kasta ka taga 12 kun oo qofood, waxayna arrintan socotaa muddo dhowr sanno ah. Sida laga soo xigtay machadka Faransiiska ee tirakoobyada iyo daraasadaha dhaqaale, magaalada Paris waxaa ka qaxay ...
Mahad Mohamed January 3, 2019
Himilo FM – Magaalooyinka loogu tagista badnaa sanadka dhamaaday ayaa la soo saaray, qiimeynta waxaa sal looga dhigay dalxiiska. Tobanka magaalo ee ugu horreeya dhanka tagidda lix ka mid ah waxay ku yaalaan Aasiya. Qiyaastii 29 Milyan oo dalxiisayaal ah ...
Mahad Mohamed December 31, 2018
Himilo FM – Adolf Hitler, hoggaamiyihii Naasiyiinta, waxa uu ku dhashay dhismo ku yaalla Braunau oo katirsan dalka Austria kuna dhaw xudduuda uu dalkaaasi la wadaago Jarmalka. Tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunida, dowladda Austria ayaa ku ...
Mahad Mohamed December 29, 2018
Himilo FM – Wargeyska El Mundo ee dalka Spain ayaa daabacay warbixin kooban oo la xiriirta xeebaha ugu khatarsan caalamka ee halis gelin kara nolosha dadka iyadoo laga fiirinayo halka ay ku yaalaan iyo xayawaanada badeed ee ku jira. Liiska ...